Global Voices teny Malagasy » Korea Atsimo: Miombona alahelo amin’ny Hirifiry nozakaina noho ny fiparitahan’ny solika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Jolay 2010 12:08 GMT 1	 · Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika zhhantar
Sokajy: Amerika Avaratra, Azia Atsinanana, Etazonia, Korea Atsimo, Tantara, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana, Voina
Raha mbola eo ampanarahana ny tatitra momba ny zava-doza ateraky ny solika miparitaka avy amin'ny BP  ao Etazonia ny any Korea Atsimo, maro ireo Koreana mpitoraka blaogy, izay ho azy ireo dia tsy mbola maty ao am-pony ny fahatsiarovana fipariahan-tsolika nahatsirariva tamin'ny 2007 niteraka fahafatesana maro teo amin'ny tantara Koreana , maneho ny ahiahiny sy ny fiaraha-miory amin'ireo niharam-boina noho ny fiparitahan'ny solika.
Tamin'ny Desambra 2007, solitany 2.7 tapitrisa galona mbola tsy voadio no niparitaka teo amin'ny toeram-pitsangatsanganana an-dranomasinana atsinanan'i Korea, eo akaikin'ny seranantsambon'i Daesan, tao amin'ny morontsiraky ny Ranmasina Mavon'i Taean County, taorian'ny nifandonan'ny sambo lehibe mpitondra entana, an'i Orinasa Samsung Heavy Industries sy ny Hebei Spirit, mpitatitra solika mavesatra an’ i Hong Kong, nandoto ny sisintany atsinanan'i Korea tamin'ny ventin-tsolika maintiny mbola tsy voadio .
[Sary avy amin'ny vehivavy mpitoraka bilaogy izay nandray anjara ho mpiasa an-tsitra-po tamin'ny fanadiovana  .]
Teo ho eo amin'ny olona 1.2 tapitrisa teo ho eo, avy amin'ny vondrona ara-tsosialy maro samihafa no nilatsaka an-tsitrapo tamin'ny fanadiovana ny moron'ny Ranomasina Atsinanana izay naharitra volana maromaro . Olo-malaza maro, mpanao politika maro, ary manam-pahaizana maro avy amin'ny sehatra maro samihafa no nanàla ny vato rakotra solika tamin'ny tanana, tsirairay, ary nampiasa fitaovana fitrohana, manala ny solika tavela .
Mitantara ao amin'ny bilaoginy  ny fijaliana tamin'ny fanaovana ny fanadiovana nandritry izany sy ny andro maro nanaraka izany ity vehivavy mpirotsaka an-tsitrapo iray vokatry ny fofona mavesatr'ilay solika ::
Na dia efa nokosehana aza ny solika, dia niverina naloto ihany ny tao Taean rehefa tonga ny rano. Nankaloiloy ahy sy nankarary ny lohako ny fofon'ny solika… mbola tsy nahazo aina sy naloiloy foana aho na dia efa niverina tany an-tranoko aza .
Na dia nampiasa ireo sambokely, ireo fiara vy mpitaona entana, helikoptera sy fiaramanidina anjatony tamin'ny sisin-dranomasina atsinanana aza ny governemanta Koreana, dia niantehitra tamin'ny asan'ny tanan'ny vahoaka ny ankamaroan'ny fomba fanadiovana, satria lasa lalina sy mivelatra amin'ny moron-drano mikotoatoana ny solika, miafina any ambany fasika sy ireo vatokely an-tapitrisany maro teo an-toerana .
Milaza ity mpitoraka bilaogy iray ao amin'ny bilaoginy ao amin'ny Daum fa mety ho vetivety ny fomba fanadiovana ny solika naparitak'i BP, raha betsaka ny isam-batan'olona sy ny fanampiana ara-bola afantoka ao, sady mitsiriritra ireo fitaovana avo lenta an'i Etazonia ihany izy:
Maro ireo antontana fitaovana tsara kalitao no nampiasaina tao amin'ny faritra, satria moa firenena manan-karena i Etazonia. Tena mety ho mora kokoa noho ny nandrasan'ny olona ny fomba fanadiovana. Tena ny mifanohitra amin'ny tranga teto amintsika, isika izay nikosika ny solika tamin'ny tànana, tsirairay ( ireo zavatra nolotoin'ny solika)…Nanangana ny Vola miantoka ny fanadiovana ny loto ateraky ny solika ny ao Etazonia… miaraka amin'ny fetran'ny fandaniana ambony indrindra (avy amin'ny Vola iantohana ny fiparitahan'ny solika) ho 1 lavitrisa dolara isaky ny loza iray mitranga. Fomba tsy dia matanjaka ihany izany raha toa ka tsy misy vondrona-na mpiasa an-tsitrapo maro any Etazonia, toy ny nataonay taty Korea .
Milaza  ny seraseram-pifandraisana eo an-toerana fa toa ny roa ampahatelo monjan'ny solika very isan'andro amin'ny fantson'i BP ny solika nandoto ny ranomasina maintin'ny solika tao Taean, ary iray ampahatelony amin'ny an'ny fiparitahan'ny solik'i Valdez . Na izany aza, ampy nahafaty ny ankamaroan'ny zava-manan’ aina an-dranomasina tamin'ny faritra mando iray anisan'ny lehibe any Korea izany, nanimba ny indostrian'ny jono sy toeram-piompiana hazan-dranomasina 445, ary ny indostrian'ny fizahantany, tamin'ny alalan'ny nahalotoan'ny valan-javaboahary nasionaly ho an'ny harena an-dranomasina, ary nanimba niaraka tamin’ izay ny fiainan’ ireo mponina ao. Voasazy i Samsung, iray amin'ireo vondron'orinasa iraisam-pirenena ngeza indrindra any Korea, noho izy nahatonga ny loza tamin'ny nanomezany alalana ny sambony ho tohiza amin'ny tady mahazaka tsizarizary ka nampikivilavila ny sambo. Nahita ireo Koreana fa tena tafavoaka niaraka tamin'ny sazy tena maivana ny orinasa Samsung Heavy Industries raha nijery ny zava-niseho tamin'ny ranomasina voaloton'ny solika tany amin'ny Helodranon'i Mexique izy ireo . .
Milaza ny tsy fahafaliam-pony amin’ ny governemanta sy ireo orinasa izay mandositra andraikitra ny mpitoraka bilaogy iray ao amin'ny Naver :
Mampatsiahy ahy ny solika niparitaka tany Taean tamin'ny ririnin'ny taona 2007 tany Korea ity [Solik'iBP niparitaka] . Vetivety dia nahavita izahay noho ny fanampiana avy amin'ny mpirotsaka an-tsitrapo maro izay toloram-pisaorana betsaka …Hita fa mety ho sarotra ho an'ny governemanta amerikana ny hiala amin'ny fanakianana noho izy taraiky vao nihetsika tamin'ity loza nitranga ity. Amin'izao fotoana izao, miezaka ny governemanta ny hanenjera ny andraikitra rehetra any amin'i BP. Mampatsiahy ahy ny tamin'ny fitsarana ny andraikitry ny orinasa Samsung Heavy Industries tamin'ny niparitahan'ny solika tao Taean izany , izay nahazoan'i Samsung sazy 5.6 lavitrisa won Koreana fotsiny [eo ho eo amin'ny 4.6 tapitrisa dolara]. Mahakivy/mahaketraka ahy mihitsy izany rehetra izany
Voasazy nandoa 30 tapitrisa won koreana, na eo ho eo amin'ny 22,000 dolara fotsiny i Samsung , miaraka amin'ny fetra ho onitra farany ambony indrindra 5.6 lavitrisa won Koreana.
Mandinika ity olana ity amin'ny fijery araka ny tena zava-misy kokoa ny mpitoraka bilaogy sasany . Naneho  ny mety ho fivadihan-javatra amin'ny vidin'ny solika noho ny fiantraikan'ny loza ara-tsolika nataon'i BP ny mpitoraka blaogy iray ao amin'ny Naver, izy tenany izay mihevitra fa mety hihoatra ny 100 dolara ny barila tsy ho ela akory amin'ity taona ity.
Nanantitrantitra  ny mpitoraka blaogy amin'ny OhMyNews fa ny tena mahamaika dia ny itadiavana vahaolana tena matotra mba hanakanana ny fiparitahan'ny solika tsy hiverina :
Tena mila manova faran'izay haingana izao tontolo izao ny amin'ny fiankinan-dohany tafahoatra amin'ny solika ary manolo izany haingana araka izay azo atao amin'ny fampiasana angovo ara-ekolojika … An'ity tany ity isika rehetra, ary tsy hoe raharahan'ny hafa intsony izany .
Naneho ny fiombonan'alahelo ny Koreana, taorian'ny fahamaizany tamin'ny loza fiparitahan'ny solika nahazo azy ireo, amin'ny fiparitahana tsy misy fiafaran’ ny solika ao Etazonia, sy ny vokatra mety hateraka izany eo anivon'izao tontolo izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/05/6940/
 ny zava-doza ateraky ny solika miparitaka avy amin'ny BP: http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill
 fipariahan-tsolika nahatsirariva tamin'ny 2007 niteraka fahafatesana maro teo amin'ny tantara Koreana: http://en.wikipedia.org/wiki/2007_Korea_oil_spill
 amin'ny vehivavy mpitoraka bilaogy izay nandray anjara ho mpiasa an-tsitra-po tamin'ny fanadiovana: http://blog.naver.com/wed1204?Redirect=Log&logNo=130026573208
 Daum : http://blog.daum.net/cpreading/7973537
 Milaza ny tsy fahafaliam-pony amin’ ny governemanta sy ireo orinasa izay mandositra andraikitra ny mpitoraka bilaogy iray ao amin'ny Naver: http://blog.naver.com/coolluck2?Redirect=Log&logNo=140107422392
 Nanantitrantitra : http://blog.ohmynews.com/vudghk/334000